အမျိုးသမီး - အသက် ၃၁ နှစ် - ၆ လပြည့်တဲ့အချိန်မှာ၊ သင့်ဘဝဟာပိုကောင်းလာပြီ - Brain On Porn
အမျိုးသမီး - အသက် ၃၁ နှစ် - ၆ လအမှတ်အသားတွင်ဘဝသည်သာပိုကောင်းလာသည်
ငါ NoFap ၏ 90 ရက်ပေါင်းရောက်ရှိသောအခါငါသည်ငါ့စမ်းသပ်မှုအပေါငျးတို့သအကျိုးကျေးဇူးများမြင်ကြပြီမယ်လို့ထင်ကြတယ်။ ခြောက်လအမှတ်အသားမှာ, ဘဝသာပိုကောင်းလာပြီဖြစ်ပါတယ်။
အစောပိုင်းပေါ်တရားမျှတဖြစ်စေရန်, ငါရမ္မက်ကိုထိန်းချုပ်ငါ့ဦးနှောက်ကိုသင်ပေးဖို့ဘာဝနာအလေ့အကျင့်စတင်ခဲ့သည်။ ယခုနေ့တိုင်းကျွန်မကအနည်းဆုံးဆယ်မိနစ်အဘို့ထိုင်။ ဘဝမှာအားလုံးကြီးစွာသောအပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်. ဆောင်ခဲ့သောဝိပဿနာနှင့် NoFap ၎င်း၏ပေါင်းစပ်။
အစဉ်မပြတ်ငါဘဝမှာပျက်ပြယ်ဖြည့်ခင်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုငါ့အကြီးမားဆုံးစွဲ, ဒါပေမယ့်စျေးဝယ်, အစားအစာ, အရက်, လိင်, တီဗီနှင့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အပေါင်းတို့သည်ငါ့ကိုငြင်းပယ်နေကူညီပေးခဲ့သည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတဖြည်းဖြည်းကြှနျတျောစှဲဖယ်ရှားပစ်တဲ့မယ့်အပတ်အခါ, ဒီလိုကြောက်မက်ဘွယ်သောစိတ်ခံစားမှုနာကျင်မှုနှင့်အတူထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ တရားအားထုတ်ခြင်းဟာကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာပြတ်ပြတ်သားသားငါ၏အအဖြစ်မှန်, ကြွက်နို့များနှင့်အားလုံးလကျခံဖို့အကျွန်ုပ်ကိုအတင်းအကျပ်။
ငါသည်သင်တို့အသက်တာ၌ကွာဟချက်တွေနဲ့အဆင်ပြေရရှိရန်ရရှိပါသည်သဘောပေါက်ဖို့လာပါတယ်။ အတှေးအကြားရှိတိတ်ဆိတ်, အသက်ရှူကြားရှိခေတ္တနား, အမှုအရာများအကြား space ကို။ ပဉ္စလက်ဖြစ်ပျက်ဘယ်မှာဒါဟာပါပဲ။ အခုတော့နေဆဲခြင်းမရှိဘဲ, ဘဝဖှယျနှင့်ဆွန်းခံစားရပါတယ်။ ငါကျချိန်တပ်မက်။
ပြင်ပတွင်, ငါသိပ်ပိုပြီးယုံကြည်မှုဖြစ်၏။ ကျွန်မအလုပ်မှာကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အထရပ်တယ်။ ငါမဟုတ်တော့တဲ့ pushover မိပါတယ်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော်ရန်အသုံးပြုလမ်းကိုအမှုအရာယူကြဘူး။ ငါတကယ်လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ခရီးရှိပါတယ်, မဟုတ်အရာအားလုံးငါ့ကိုအကြောင်းကိုကြောင်းလက်ခံခဲ့သည်ပါတယ်။
လိင်နှင့် ပတ်သက်. အရာခပ်သိမ်းသော် သာ. ကောင်း၏။ orgasm ဤမျှလောက်ပိုမိုလွယ်ကူလာကြ၏။ ကျနော်ကျိန်းသေဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကနေပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရ။ ငါအကောင်း-ရှာဖွေနေတို့သည်ငါ့ကိုစကားပြောသည့်အခါအဖြစ်ဦးနှောက်အာရုံကြောဘူး။ ငါမျက်လုံးချင်းအောင်မှာပိုကောင်းလာပြီပရောပရည်နှင့်ပြုံးနေတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့ငါစာနာစိတ်ရှိတယ်။ ငါကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မကြောက်ဘူး၊ သူတို့ကိုငါမတွန်းလှန်တော့ဘူး။ ငါ့ဘဝမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးအားလုံးတိုးတက်နေတယ်။ တခြားသူတွေဘယ်ကနေလာကြတာလဲငါနားလည်တယ်။ ဒါဟာပconflictိပက္ခဖြေရှင်းတဲ့လေပြေစေသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကသူတစ်ပါးရဲ့အမြင်ကိုနားလည်နိုင်တယ်၊ ငါ့ဘဝမှာဒီလောက်များတဲ့ဒရာမာတွေမရှိဘူး။ ငါထွက်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မိတ်ဆွေများကိုဖွဲ့ပါတယ်။ သူတို့ဟာမိသားစုလိုခံစားရတယ်၊ ပြီးတော့မြို့ကြီးတစ်မြို့မှာသင်တစ်ယောက်တည်းနေတဲ့အခါသိပ်အရေးကြီးတယ်။ ငါအထီးကျန်မဟုတ်သောကြောင့်ငါအငွေ့မစားရ။ ငါကိုယ်အလေးချိန်ကျတယ် ငါနှစ်များတွင်ကြည့်ရှုပါအကောင်းဆုံးပါပဲ။
ကျွန်မကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်ကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါအမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ငါ့အဘို့, NoFap ငါ့အသက်ကိုညာဘက်မှာရှိတဲ့အမှုအရာအောင်ကိုစတင်ရန်တစ်ခုအံ့သြဖွယ် tool ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ကိုဖော်ပြရန်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကပိုပြီးလူ့ကိုဖန်ဆင်းသည်။ အရမ်းမကြာခဏ Masturbating နီးပါးအနာရောဂါ၏အဆင့်အထိလွတ်လပ်ရေးရဲ့စိတ်ဓာတ်အားဖြည့်ရန်ပုံရသည်။ ကျွန်မပြောပြနိုင်မှ, ငါ့ NoFap စမ်းသပ်မှုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။ အလွန်ချစ် faptronauts !!!
LINK - 180 နေ့အစီရင်ခံစာ - ဒါဟာသာလျှင် သာ. ကောင်း၏လာ